फोरम-नयाँ शक्ति एकता २३ गते, यस्तो छ भागबण्डाको तयारी ! - Nepal Post Daily
फोरम-नयाँ शक्ति एकता २३ गते, यस्तो छ भागबण्डाको तयारी !
काठमाडौं । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकीकरण अन्तिम चरणमा पुगेको नेताहरुले बताएका छन् । फोरम र नयाँ शक्तिबीच २३ गते पार्टी एकता गर्ने आन्तरिक तयारी भइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार दुई दलको वार्ता समिति स्तरमा छलफल टुंगिएको छ । पार्टीको अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई हुनेछन् भने कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हुने सहमति भएको फोरम नेपाल पार्टीका एक नेताले बताए । अशोक राईलाई वरिष्ठ नेता राख्ने सहमति पनि भएको छ ।
यी तीन जनाको नाम राखेर मात्र पार्टी एकीकरणको घोषणा हुनेछ । त्यसपछि अन्य पदाधिकारीको विषयमा सहमति गर्ने स्रोतले जनाएको छ । महासचिवमा उपेन्द्र यादवको तर्फबाट रामसहाय यादव रहने, बाबुराम भट्टराईको तर्फबाट गंगा श्रेष्ठ र अशोक राईको तर्फबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ महासचिव रहने मोटामोटा सहमति भएको बताइएको छ ।
प्रदेश १, २ र ५ मा फोरम नेपालका तर्फबाट जो अध्यक्ष छन् उनीहरु नै रहने, ३ नम्बर प्रदेशमा अशोक राईको तर्फबाट र ६ र ७ नम्बर प्रदेशमा डा।बाबुराम भट्टराईका तर्फबाट अध्यक्ष रहने मोटामोटी सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रदेश १, २ र ५ मा मनोनित हुने सदस्य तथा पदाधिकारीमा नयाँ शक्तिबाट समायोजन गरिनेछ भने अन्य प्रदेशमा पनि वरिष्ठताका हिसाबले तीनवटै समूहबाट समायोजन गरिने बताइएको छ ।
पार्टी एकीकरण गर्न बनेको वार्ता टोलीले एकीकृत पार्टीको नाम समाजवादी पार्टी प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा अगाडि नेपाल थप्ने विकल्प पनि दिइएको छ ।
एकता प्रक्रियालाई अन्तिम रुप दिने उद्देश्यका साथ बिहीबार यादव र भट्टराईबीच ‘वान टु वान’ वार्ता भएको छ ।
दुई अध्यक्षबीच विहान पहिलो एक चरणको ‘वान टु वान’ वार्ता सकिएको छ भने दोस्रो चरणको छलफल पनि आजै बुढानीलकण्ठको एक घरमा चलिरहेको नयाँ शक्ति पार्टी स्रोतले जनाएको छ ।
विहान भएको छलफलबाट दुवैजना अध्यक्षले एकीकृत पार्टीको आधिकारिक दस्तावेज तयार गरेको बताइएको छ । यस्तै दोस्रो चरणको छलफलबाट दस्ताबेजलाई अन्तिम रुप दिइने छ ।
ती दस्तावेजलाई शुक्रवार बस्ने नयाँ शक्ति पार्टीको सचिवालय बैठक र शनिवार बस्ने फोरम नेपालको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट अनुमोदन गराइने बताइएको छ ।
Previous articleपरीक्षा केन्द्रमाथि गम्भरी आरोप लगाउँदै परीक्षार्थीले गरे प्रदर्शन (भिडियो)
Next articleकुवेतमा नेपाली प्रेमी प्रेमिका बिच झगडा भएपछि प्रेमिकाले गरिन् प्रेमीको हत्या